Liiska Xildhibaanada caawa la shaaciyey iyo beelahooda. - Xusuus
Saturday, 18 August, 2012 I Latest Update 12:46 am Home
Home Wararka maanta Xulshada
Liiska Xildhibaanada caawa la shaaciyey iyo beelahooda.
Guddiga Farsamada ee xulista Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gudbiyey 202 xildhibaan, waxaana dhiman 73 xubnood oo laga sugayo in ay odayaal dhaqameedka u soo gudbiyaan guddiga farsamada.
Madaxweyne Shariif iyo Mahiga oo isku mowqif noqday. Gudiga doorashada iyo shuruudaha musharaxiinta oo nababar ku noqday Categories
Wararka maanta, Xulshada Tags
xusuus Add a Comment on "Liiska Xildhibaanada caawa la shaaciyey iyo beelahooda."